မင်းရဲ့အလုပ်ကမင်းရဲ့အလုပ်ကိုလား ဝန်ထမ်းဘယ်နှစ်ယောက်ရှိသလဲ | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, စက်တင်ဘာလ 6, 2007 တနင်္လာနေ့မတ်လ 18, 2013 Douglas Karr
လွန်ခဲ့သောလအနည်းငယ်က၊ သင်သည်ကျွန်ုပ်စားပွဲခုံတွင် ၉ မနက်သို့မဟုတ်နောက်မကျမီကိုဖမ်းမည်မဟုတ်။ ငါနောက်ကျတာမဟုတ်ဘူး။ ငါ့အလုပ်ကငါလုပ်နေတာထက်ပိုပြီးလုပ်နေတာပဲ။ အတော်လေးဖြစ်နိုင်သည်မှာ၎င်းသည်အနောက်အလယ်ပိုင်းတွင်လူတစ် ဦး ရှာဖွေနိုင်သောအကောင်းဆုံးအလုပ်ဖြစ်သည်။ ဆော့ဖ်ဝဲလုပ်ငန်းနယ်ပယ်မှာဆိုရင်ငါဟာလူတွေကိုပိုကောင်းအောင်ရှာဖို့တကယ်စိန်ခေါ်လိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကုန်ပစ္စည်းမန်နေဂျာတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးဒေသတွင်း၌သာမကတိုင်းပြည်တွင်ပါအမြန်ဆုံးတိုးတက်သောကုမ္ပဏီများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ လျင်မြန်သောတိုးတက်မှုနှုန်းသည်၎င်းနှင့်အတူစိန်ခေါ်မှုများစွာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
ငါထုတ်လုပ်မှုနောက်ခံကနေလာ။ , ခေတ်သစ်အလုပ်ငါ့အထင်အမြင်အများကြီးနေဆဲငါ့အအင်ဂျင်နီယာ core ကိုမှပြန်လည်ရောက်ရှိ။ ကုန်ပစ္စည်းဒီဇိုင်းရေးဆွဲတည်ဆောက်၊ ရောင်းချ၊ ပံ့ပိုးသည်။ ဒါဟာတော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်။ သင်မြန်တဲ့နှုန်းနဲ့ကြီးထွားလာတယ် စည်းဝေးပွဲလိုင်းအသစ်ကိုစတင်မယ့်အစား၊ လူတွေကိုသူထပ်ထည့်တယ်။ စွတ်ဖားလေးကိုစွတ်ဖားဆွဲနေတယ်ဆိုပါစို့။ နောက်ထပ်ခွေးနှစ်ကောင်နှင့်မြင်းစီးသူရဲထပ်မံထည့်ပါ။ ယခုသင်၌ကြီးမားသောခွေးတစ်ကောင်နှင့်ခွေးခေါင်းဆောင်တစ် ဦး လိုအပ်လာသည်။ သို့သော်များလွန်းစွာထည့်ပါ၊ ခွေးများသည်မည်သည့်လမ်းကြောင်းသို့သွားမည်၊ မည်သည့်နေရာတွင်ရောနှောနေသောနေရာတွင်ပျောက်သွားမည်ကိုမသိပါ။
တကယ်တော့အမြီးအမောက်ကြီးထွားမှုသည်စီးပွားရေးအောင်မြင်မှု၏အဓိကလက္ခဏာများအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ငါလုံးဝစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေကိုမခေါက်ဘူး အလုပ်လုပ်ကိုင် ကြီးမားတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုအတွက်။ ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံးအသွင်ကူးပြောင်းမှုနဲ့အတူကျွန်တော်ဟာကုမ္ပဏီ ၂၀၀ ကျော်ကနေကုမ္ပဏီ ၅ ခုသို့ပြောင်းရွှေ့ခဲ့သည်။
ငါ့အလုပ်သစ်မှာလူတွေထက်အလုပ်နှစ်ဆ၊ သုံးကြိမ်လောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်။ ကွာခြားချက်ကတော့ဘယ်သူမှဘယ်သူ့ကိုမှစောင့်မနေဘူး။ ငါတို့အားလုံးဟာအလုပ်ကိုအမြန်ဆုံးအမြန်ပြေးနိုင်အောင်ကြိုးစားနေတယ်။ ဘယ်သူမှစိတ်ဆိုးစရာမလိုပါဘူး၊ ဘယ်သူမှအော်ဟစ်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ငါတို့အားလုံးဟာတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကုန်ပစ္စည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်တွေရှေ့ကိုတိုးတက်အောင်ကူညီပေးနေပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်အချို့သည်မယုံနိုင်လောက်အောင်ကြီးမားသည်၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့သည်သူတို့နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိပြီးကျွန်ုပ်တို့၏တိုးတက်မှုကိုအသိပေးနေသမျှကာလပတ်လုံး၎င်းတို့သည်အလွန်ခွင့်လွှတ်သည်။
နောက်ဆုံး တနင်္ဂနွေ ငါ PBX ဖုန်းစနစ်၊ ကွန်ယက်၊ ကြိုးမဲ့ကွန်ယက်တစ်ခုကိုတပ်ဆင်ခဲ့တယ်၊ ပထမဆုံးသတင်းလွှာကိုဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့တယ်၊ ငါတို့ရဲ့ပထမဆုံးလှုပ်ရှားမှုကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့တယ်၊ တီထွင်သူအဖွဲ့နှစ်ခုအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စနစ်အတွက်အဆင့်မြှင့်တင်မှုများစွာအတွက်လိုအပ်ချက်တွေရေးခဲ့တယ်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏နေရာဟောင်းမှအသစ်နေရာများသို့ရုံးခန်းသည်ဖောက်သည်အသစ်များကိုအကောင်အထည်ဖော်ရန်ကူညီခဲ့ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဆက်ဆံခဲ့သည် ဖုန်းကုမ္ပဏီ ပြဿနာများကို။
ဒါကငါကပိုကြီးတဲ့ကုမ္ပဏီမှာငါပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကရရှိထက်ပိုမိုဖြစ်နိုင်သည်! ဒီမှာငါပြောခဲ့တာကငါအလုပ်လုပ်ခဲ့သောကုမ္ပဏီကိုခေါက်ရန်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဖောက်သည်တစ် ဦး အဖြစ်ဆက်လက်ရပ်တည်နေရန်နှင့်သူတို့ကိုစက်မှုလုပ်ငန်းတွင်အကောင်းဆုံးအဖြစ်သတ်မှတ်ရန်ဖြစ်သည်။ ကျနော့်အချက်ကတော့သေးငယ်တဲ့၊ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအဖွဲ့ငယ်တွေဟာလျှပ်စီးမြန်တဲ့နေရာမှာရွေ့လျားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအာရုံစိုက်ဖို့ပဲ။ သင်တိုးတက်မှုကိုမြင်လိုလျှင်၊ ဗျူရိုကရေစီယန္တရားကိုဖယ်ရှားပြီးသင်၏ ၀ န်ထမ်းများအားအောင်မြင်မှုရရှိစေရန်လုပ်ပိုင်ခွင့်ပေးပါ။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကကျွန်ုပ်ဖတ်ခဲ့သောဥပမာတစ်ခုမှာအကြောင်းဖြစ်သည် WL ဂိုး, တီထွင်သောကုမ္ပဏီ Gore-tex.
ဂိုး FORTUNE မဂ္ဂဇင်း၏“ အမေရိကတွင်အလုပ်လုပ်ရန်အကောင်းဆုံးကုမ္ပဏီပေါင်း ၁၀၀” ထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ယဉ်ကျေးမှုသည်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုဖော်ထုတ်ခြင်းနှင့်အဖွဲ့လိုက်လုပ်ဆောင်ခြင်းအားဖြင့်ကြီးထွားမှုကိုရှာဖွေနေသည့်ခေတ်ပြိုင်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်စံပြဖြစ်သည်။
Gore မှခေါင်းဆောင်များသည်အချို့သော ၀ န်ထမ်းများထက် ကျော်လွန်၍ တည်နေရာကိုကြီးထွားစေခြင်းအားဖြင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုကိုလျှော့ချပြီးကုန်ထုတ်စွမ်းအားကိုလျှော့ချခဲ့သည်။ ကုမ္ပဏီကိုကြီးထွားစေမည့်အစား Gore သည်ထုတ်ကုန်လိုင်းများနှင့်တည်နေရာတစ်ခုစီ၏ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံကိုထင်ဟပ်စေပြီး 'အသစ်' ကုမ္ပဏီတစ်ခုကိုစတင်ခဲ့သည်။ ယခု ၄၅ နေရာတွင်အလုပ်သမား ၈၀၀၀ ကျော်ရှိသည်။ သင်ကသင်္ချာလုပ်ရင်တည်နေရာမှာ ၀ န်ထမ်း ၁၇၇ ယောက်လောက်ရှိတယ်။
Software ကိုဒီဒီဖွဲ့စည်းပုံမှသူ့ဟာသူချေးငှားသည်။ နက်ရှိုင်းသောလျှို့ဝှက် bug များ၊ အလွှာများနှင့်ရှုပ်ထွေးမှုအလွှာများဖြင့်ကြီးမားသည့် application တစ်ခုကိုတီထွင်ရန်ကြီးမားသောဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့တစ်ခုသည်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကျော်လွှားရန်မလိုအပ်ပါ။ အဲဒီအစား, SOA သေးငယ်တဲ့, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရအသင်းများကိုအားပေးအားမြှောက်။ အဖွဲ့တစ်ခုချင်းစီသည်ရှုပ်ထွေးသောဖြေရှင်းနည်းများကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။ တစ်ခုတည်းသောသာမန်မှာလျှောက်လွှာ၏အစိတ်အပိုင်းများအချင်းချင်းပြောဆိုပုံကိုဖြစ်သည်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့သေးငယ်တဲ့ဘ ၀ ဟာကောင်းတယ် ကုမ္ပဏီ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုရန်ပုံငွေကိုယခုရယူနေပြီဖြစ်သည် ငါ့ကိုဆက်သွယ်ပါ တကယ်လို့မင်းကအလေးအနက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူဆိုရင်မင်းစက်မှုလုပ်ငန်းကျယ်ပြန့်တယ်။ အချို့ကသဘောမတူနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့၌အရည်အချင်းရှိသောပြိုင်ဘက်တစ်ယောက်ရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်မယုံပါ။ အီးမေးလ်၊ SMS၊ Voiceshot၊ ဖက်စ်၊ ဝက်ဘ်စသည်တို့ကိုမြှင့်တင်ပေးသည် POS စားသောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုနှင့်အမြတ်အစွန်းတိုးမြှင့်နိုင်ရန်နည်းပညာများ။
ကံကောင်းတာကကျွန်တော်တို့ဟာပိန်၊ ပိန်နေ၊ အံ့သြစရာမြန်တဲ့နှုန်းနဲ့ရွေ့လျားနေတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စားသောက်ဆိုင်၊ ၀ က်ဘ်ဆိုက်၊ ရှာဖွေခြင်းနှင့်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများတွင်လူသိများသောကုမ္ပဏီများနှင့်ဆက်ဆံရေးထူထောင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါစက်မှုလုပ်ငန်းငါတို့အဘို့ငါတို့ဖြစ်ပါတယ်ကျနော်တို့ကလုပ်ဖို့မဟာဗျူဟာနှင့်ခေါင်းဆောင်မှုရှိသည်။ ငါတို့သည်မကြာမီမည်သည့်အချိန်ငှားရမ်းရန်စီစဉ်နေမဟုတ်ပါဘူး။
ဒီနေ့ငါအလုပ်ကိုလုပ်နေတယ်၊ ​​ငါ့ကိုလုပ်ခွင့်မရှိဘူး။ ငါမနက် ၈ နာရီမှာရုံးမှာရှိတယ်၊ လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ကထက်တစ်ပတ်ကို ၁၀ နာရီမှ ၂၀ နာရီပိုပြီးအလုပ်လုပ်တယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဟာအဆတိုးပမာဏကိုလုပ်ပြီးပြီ နှင့် အကျိုးဖြစ်ထွန်းသော။ ၀ န်ထမ်း ၁၇၇ ယောက်ကိုမကြာမီအချိန်တွင်မရရှိနိုင်ပါဟုကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါသည်။ နေရာအသစ်တစ်ခုထပ်မံမချရန်ဆုံးဖြတ်ခြင်းမရှိပါက!
စက်တင်ဘာ 10, 2007 မှာ 9: 52 AM
ဆောင်းပါးကောင်း။ ကျွန်တော်သည် ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုတွင် အလုပ်လုပ်သော်လည်း အားလပ်ချိန်များတွင် ဝဘ်အသေးစားတစ်ခုနှင့် ဘလော့ဂ်အနည်းငယ်ကို လုပ်ဆောင်သောကြောင့် ၎င်းအကြောင်းကို မကြာခဏတွေးပါသည်။ Data Governance သည် နေ့စဉ်နေ့တိုင်း ကျွန်ုပ်လုပ်ဆောင်နေသည့်အရာဖြစ်သည်၊ သို့သော် သင်သည် လုပ်ငန်း၏ အစိတ်အပိုင်းတိုင်းကို အရသာခံနိုင်သောကြောင့် startup များကို နှစ်သက်ပါသည်။
စက်တင်ဘာ 10, 2007 မှာ 9: 53 AM
ကျွန်ုပ်၏ URL ကို ဖျက်လိုက်ပြီဆိုတာ သိလိုက်ရတယ်...။